Galeyr: Haddii Xamar aqoonsan weydo Khaatumo go’aan ayaan qaadaneynaa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Siyaasiga Cali Khaliif Galeyr, oo maanta tuulada Saax-dheer ee gobolka Sool loogu doortay madaxweynaha maamulka Khaatumo ayaa sheegay inuu dowladda Federaalka ka sugayo iney aqoonsato maamulka uu hogaamiyo.
Cali Khaliif ayaa sheegay in hadii dowladda Soomaaliya aqoonsan weydo maamulka Khaatumo ay iyaguna qaadan doonaan tilaabo u gaar ah.
“Haddii maamulka Xamar si degdeg ah u aqoonsan waayaan maamulka Khaatumo, annaguna go’aan ayaan qaadan doonaa” ayuu yiri Cali Khaliif oo la hadlay BBC.
Cali Khaliif Galyer ayaa sidoo kale sheegay in maamulka Khaatumo oo mucaaradad kala kulamaya Somaliland iyo Puntland aan la joojin doonin diidmada labasaa maamul.
Dhanka kale, waxaana doorashada Cali Khaliif ka hadlay wasiirka dib u heshiisiinta Somaliland, Cali Maxamuud (Sandulle), kaasoo sheegay in arrintaasi aysan saameyn ku yeelan doonin maamulka Somaliland.
“Doorashada Cali Khaliif Galeyr saameyn kuma laha Somaliland, isaga ayay meel ka dhac ku tahay, oo hoos ayuu u dhacay” ayuu yiri wasiir Cali Sandulle.
Baarlamaanka maamulka Khaatumo ayaa saaka madaxweyne u doortay xildhibaan Cali Khaliif Galeyr oo R/wasaare kasoo noqday Soomaaliya.